MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဘုရားကိုဖြိုလျင် မင်းအစိုးရ ငိုရမည်
ရာဇ၀င် သမိုင်းသက်သေ အထောက်ထားများဖြင့် တင်ပြထားပါသည်
၀မ်ပေါင်နှင့် ထိပ်ပြောင် တို့ လောဘဇောတိုက်ပုံများက အံ့မခန်းလိလိပင်တည်း။ ထိပ်ပြောင်ဟုဆိုလျင် မည်သူကို တိုက်ရိုက်ရည်ညွန်းသနည်း။
သူသည် မြစ်ဆုံကို မြွေမသေဒုတ်မကျိုး အလည်စီးရိုးတွင် နေပြကာ ပြည်သူများအား မျက်လှည့်ပြလေသော လက်လှည့် နုတ်လှည့် အတည့်မှ ဇောက်ထိုး လုပ်တတ်သူပင်တည်း။
ယခု ၀မ်ပေါင် ဈေးချောင်ချောင်နှင့် ၀င်နိုက် ခရိုနီ စစ်ပဒေသရာဇ်တသိုက်နှင့် လောဘဇော တိုက်နေလေပြီ။ လောဘဟုဆိုရာဝယ်….. ကာမဂုဏ်အာရုံများတွင် အမှားအမှန်ခွဲခြားခြင်း မရှိပဲ မရမကလိုချင်မှု၊ ရပြီးရင်းရလိုရင်း သဘောဖြင့် လိုချင်မှု၊ ရလာသည့် အရာများတွင်လည်း တွယ်တာကပ်ငြိထားလိုမှု သဘောမျိုးကို လောဘဟုဆိုသည်။
ယခု လက်ပံတောင်းဒေသ မြေဧက ၇၀၀၀ထောင်ကျော် တောင်ကြီးတောင်ငယ်ပေါင်း ၃၃ လုံးတို့အား မရမက လိုချင်နေကြလေပြီ။ ထိုတောင်များတွင်မက ထိုတောင်ကြီးများတလျောက်တွင် ရှေ့ယခင်ဆက်ဆက် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြလေသော သာသန အဆောက်အုံ များအား ဖယ်ရှားလိုမှု ဖြိုဖျက်လိုမှု တို့ ဖြစ်လာလေပြီ။
ဘုရားရုပ်ထု ဘုရားစေတီနှင့် ဘာသာရေးအရ တည်ထားကိုယ်းကွယ်ကြသော ဘာသာရေးအဆောက်အုံတို့အား ဖယ်ရှားခြင်း ပြောင်းရွှေခြင်း ဖြိုဖျက်ခြင်းစသော အကြောင်းများတွင် ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပင် လူယုတ် လူညံ့ အဓမ္မအသွင်ဖြင့် ဘုရားရှင်အား ဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားသော အရှင် ဒေ၀ဒ္ဒတ္တအား စာရေးသူလှမ်းမြင်မိသည်။
ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား ဆွမ်းကြွတော်မူလောသော အချိန်ဝယ် တောင်ကုန်းမြင့်အထက်မှ ကြီးမားသော ကျောက်တုံးကြီး တွန်းလှိမ့်ချကာ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့သော ယောက်ဖတော် ဒေ၀ဒ္ဒတ္တအား စာဖတ်သူများ ပြန်လည်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် သူ၏ ယုတ်ညံ့စုပ်ချာသော အကြံစည်တို့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ သူသာလျှင် နောက်ဆုံး အစိမ်းလတ်လတ် မြေမျိုခံရသော ပဥ္စနန္ဒိယကံထိုက်ခဲ့လေသည်။
စာရေးသူ ထပ်မံထောက်ပြလိုပြန်သည်….အရှေ့ကိုလျောက်လိုလျှင် အနောက်ကို ပြန်ကြည့်ကာ သင်ခန်းစာများဖြင့် လျောက်သင့်ကြသည်။ ထိုကြောင့် မြန်မာရာဇ၀င် ဖြစ်ရပ်မှန်အား အခိုင်မာ ထောက်ပြပါအံ့….
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်တွင် …ဦးဝိုင်းခေါ် ဘိုတော်ဘုရားဆိုသော မင်းဘုရင်ပဒေသရာဇ်တဦးမှ သားတော် သတိုးမင်းစေားအား ၁၅ ရက်ဂျွန်လ ၁၇၆၂ နှစ်တွင် မွေးဖွားလေသည်။ သားတော် သတိုးမင်းစေားသည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် သတ်ပုန်ထိုးခုတ်သော တိုက်ခိုက်ရေးဘက်တွင် ၀ါသနာပါသူဖြစ်ခဲ့ရပြီး အရွယ်ရောက်လာသောအခါ ပြည်တွင်းစစ်များတွင် တိုက်ခိုက်ရေးဘက်သို့ တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး …ဧပြီလ ၉ရက် ၁၈၀၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်ရှေ့စံရာသရဖူဆောင်းကာ နောင်တွင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်အတွက် ရှင်ဘုရင်တပါး ဖြစ်လာရန် လျာထားခြင်း ခံခဲ့ရ၏။
ထိုသို့ တင်မြောက်ခံရသော အကြောင်းရင်းမှာ ခိုင်လုံလှပေသည် ညစ်ငြမ်းလှပေသည်..စုပ်ချာလွန်းပေသည် ဟုဆိုနိုင်လေ၏။
စစ်မာန်ထ ဟန်ရေးပြလျက်ရှိနေတတ်သော သတိုးမင်းစေားသည် အိမ်ရှေ့စံ မင်းသားကြီး ရာထူးရရန် လောဘဇောဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် စစ်သေနာပတိချုပ်ဆိုသော ရာထူးဖြင့် ရခိုင်ပြည်သို့ စစ်သည်အင်းအား သုံးသောင်း၊ မြင်းတပ်အင်အား ၂၅၀၀၊ ဆင်စီးတပ်အင်အား ၂၀၀ ဖြင့် ချီတက်ကာ စစ်ကြောင်းကြီး သုံးကြောင်းခွဲ၍ ချီလေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၁၇၈၄ ခုတွင် ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးသို့ ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်မှ လူသူနှင့် ယာဉ်ကျေးမှု စာပေ အနုပညာ စသော အမွေနှစ်များအား မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်ကြခဲ့သည်။
ထိုသို့သယ်ဆောင်ရာတွင် ရခိုင်လူမျိုးတို့ ရာစုနှစ်များစွာက ကိုးကွယ်ပူဇော်ခဲ့ကြလေသော မဟုမုနိခေါ် မဟာ မြမုနိ ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးလည် သယ်ဆောင်ခံရလေသည်။ သယ်ဆောင်ခြင်းပြုကြရာဝယ် မူလတည်ရှိသော မဟာမြမုနိဘုရားကြီးဆင်တုတော်သည် အရွယ်စားအရ အတော်ပင် ထုထည် အလေးချိန် ကြီးမားနေသောကြောင့် သတိုးမင်းစေားနှင့် သူ၏ အပေါင်းပါတပ်များအတွက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော ရခိုင်ရိုးမနှင့် တောင်တန်းကြီး ၂၂ ခုတို့အား ကျော်ဖြတ်ရန် ခရီးမှာ အလွန်ဆိုးဝါးနေပြီး ရာသီဥတုမှာခဲ အေးလွန်းသောကြောင့် ခရီးလမ်းတွင် အခက်ခဲများစွာရှိနှင့်သည်ကို တွေးမြင်ကြီပြီး နောက်ဆုံးသယ်ဆောင် ရွေ့ပြောင်းရန် မဟုာမြမုနိဘုရားကြီး အား မူးရင် အတိုင်းသယ်ဆောင်သွားရန် မဖြစ်နိုင်တော့သည်ကို ဆုံးဖြတ်ကာ…..ဘုရားကြီးအား…အစိတ်ပိုင်း ခုနှစ်ခု ဖြတ်တောက်သယ်ဆောင်ကြလေသည်။ ရခိုင်တို့၏ အမြတ်တနိုးထားသော ဘုရားကြီးမှာ သတိုးမင်းစေား၏ အစီမံအရ အစိတ်ပိုင်း ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားရကာ မြန်မာပြည်သို့ ရောက်လေသည်။ မြန်မာပြည်သို့ရောက်သောအခါ..ဖြတ်တောက်ပြီးသော အစိတ်ပိုင်းများအား သူ့နေရာနှင့်သူ ပြန်လည်ထပ်ဟပ်ပြီး ကြေးရည်ထပ်မံသွန်းလောင်းကာ ရုပ်လုံးပုံဖေါ်စေ၍ ဘိုးတော်ဘုရား ဦးဝိုင်းအား ဆက်သကြခဲ့လေသည်။
ထိုသို့ အတင့်ရဲသော အစွမ်းကြောင့် သတိုးမင်းစေားမှာ မဟာကောင်းကင်ကြီးပေါ်သို့ ရောက်လုမတတ် ဖြစ်ရပြီး ဦးဝိုင်း၏ဘက်ပြိုင်မယားများမှ မွေးထားသော မင်းသားပေါင်း ၂၇ ယောက်တို့တွင် ပထမရာထူးဟု ဆိုနိုင်သည့် အိမ်ရှေ့စံမင်းသားကြီးအဖြစ် ရွှေစလွယ်ဘွဲ့တံဆိပ် အပ်နှင်းခြင်းခံရကာ မယားပေါင်း ၂၂ ယောက်ဖြင့် ပျော်မြူးနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့လေသည်။
သို့သော် သိပ်မကြာပါ မဟာ မြမုနိဘုရားကြီးအား အပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ် ဖြတ်တောက်ကာ သယ်ဆောင်လာသော သူ၏ လောဘ အတ္တစိတ်တို့၏ အကုသိုလ်အကျိုးပေးခဲ့လေသည်.. ဧပြီလ ၉ရက် ၁၈၀၈ ခုနှစ်တွင် ဘိုးတော် ဦးဝိုင်း၏ သားတော် စစ်ကဝေဟု အများက ခေါ်ဆိုကြသော သတိုးမင်းစောသည် ညသန်းခေါင်းတွင် အိမ်မက်ဆိုးများမြင်မက်ခဲ့ပြီး ၄င်းအိမ်မက်ဆိုးများထဲတွင် သူ့အား တဖက်ရန်သူများမှ အရှင်ဖမ်းမိကာ အပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ် ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံရကာ အသံကြီးအသံငယ်တို့ဖြစ် အော်ဟစ်နေပုံတို့အား အိမ်ရှေ့စံ အဆောင်တော် တခုလုံး ဟီးဟီးထီးထီး အသံဆိုးအသံနက်များဖြင့် ဂယောင်ဂတမ်း အော်ဟစ်နေသော အသံဆိုးတို့အား နန်းတော်ရာ အမှုတမ်းနှင့် မောင်းမတော်များကြားရ၍ အပြေးလွှား ရောက်သွားကြလေသောအခါ ၄င်း၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွင် အစိတ်ပိုင်းများစွာ ပြတ်တောက်လုမတတ် ဖြစ်နေကာ အက်ကြောင်းကြီးများဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရလေသည်။
စာရေးသူ တင်ပြလိုသော အကြောင်းသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်အား သေရာသေကြောင်းကြံစီခဲ့သူ ဒေ၀ဒ္ဒတ္တ နှင့် ရခိုင်ပြည်သူ ပြည်သားတို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်အားထားရာဖြစ်သော မဟာ မြမုနီဘုရားကြီးအား အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခဲ့သူ …ဘိုတော်ဦးဝိုင်း၏ သားတော်ကြီး သတိုးမင်းစေားတို့ ဖြစ်ရပ်မှာ လက်တွေ့ဆန်လွန်းလှပေသည်။
ယခုတွင်လည်း လယ်တီဆရာတော်ဘုကြီးကိုယ်တိုင် ရေစက်ချ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော လက်ပံတောင်း စေတီတော်မြတ်အား ယနေ့ စစ်တပ်အသွင်းပြောင်း အစိုးရနှင့်တရုတ်ကုမ္မဏီတို့မှ ရွှေပြောင်းခြင်း ဖယ်ရှားခြင်းများ ပြုလုပ်ကြလေတော့မည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းတရားသည် လောဘ ဖြစ်လေသည်။ ထိုဘုရားကြီး၏ အောက်တည့်တည့်တွင် အလွန်အရေးပါသော ရွှေကြောကြီး ရှိနေသည်ဟု တရုတ် ဘူမိဗေဒသမားတို့၏ တွေ့ရှိမှုက အရင်းခံခဲ့၏။ ထိုရွှေကြောကြီးအား တိုက်ရိုက် အလွယ်တကူ ဖောက်ထွင်း တူးဖေါ်နိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိအစိုးရနှင့် တရုတ်တို့ ဘာမဆိုလုပ်ကြလေတော့မည်။ ယခင်လည်း သံဃာတော်များအား မီးလောင်ဗုံးဖြင့် လောင်တိုက်သွင်းခဲ့သော နေရာနှင့်လည်း အလှမ်းအဝေးသောနေရာတွင်ရှိနေလေသည်။
ထိုသို့ အဓမ္မ ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုလက်ခံထားသော လက်ပံတောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှလည်း သဘောတူလက်ခံထားလေသည်။ သို့သော် နောင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက်ဟုဆိုသည် ဘကြီးတော် ဘုရားလက်ထက်တွင် ကျော်ဇော် တိကမ အလွန်ရှိပြီး တရားဓမ္မစာပေတွင် အထူးနှံစပ် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာတော် ဦးဗုဒ်၏ သံသရာ စကားအရဆိုပါလျှင် ကံ ကံ၏အကျိုး အမြဲပင် ရှိပါကြောင်းနှင့် မမြဲသော လက်ရှိခန္ဓာသည် မိမိပြုသော ကံသုံးပါး (ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှံ့လုံး)တို့မှ ထွက်ပေါ်လာသော အရာတို့အား ပြန်လည်သက်ရောက်မှုမှာ ထာဝရ တည်ရှိနေပါကြောင်း လက်ပံတောင်းဒေသခံများကိုယ်စား….စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဥက္ကဌကြီး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား၎င်း နေပြည်တော် အာဏာပိုင်များအား၎င်း…စစ်ပဒေသရာဇ် ဦးပိုင် ခေါင်းဆောင်များအား တိုက်ရိုက်ရည်ညွန်း တင်ပြလိုပါသည်။…
ဘုရားပြောင်းရွှေခြင်း ဖယ်ရှားခြင်း ဖြိုဖျက်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည်ဖြစ်သော ရာဇ၀င် အချက်လက်များအား စာဖတ်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများအနေဖြင်….
(မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံအဆုံးအဖြတ် ၊ စေတိယပကာသနီကျမ်း လို့ နှင့် ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော်) ဆိုသော ကျမ်းများ စာအုပ်များအား ဖတ်ရှု့ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်စေချင်ပါသည်။
at 9/30/2013 05:09:00 PM